Julen Lopetegui oo Habeen Dambe laga ceyrin doono Real Madrid haddii…. – Gool FM
Byare October 22, 2018
(Madrid) 22 Okt 2018. Julen Lopetegui ayaa laga ceyrin doonaa kooxda Real Madrid ka hor kulanka El Clasico ee usbuuca soo socda haddii ay guul darro ka soo gaarto Viktoria Plzen.
Los Blancos ayaa habeen dambe la ciyaari doonta kooxda reer Czech, haddii laga adkaado ama xitaa ay bandhig liita la yimaadaan waxaa shaqada ku wayn doona Lopetegui.
Florentino Perez iyo maamulka sare ee kooxda Real Madrid ayaa go’aan ka gaaray mustqabalka macalinka reer Spain iyadoona la isku af gartay in la ceyrin doono haddii ay guul darro kale soo gaarto ama xitaa bandhig aan loo riyaaqin.
Waxayna taa ka dhigan tahay in wadada kaliya uu Lopetegui ugu sii fadhin karo kursiga Bernabeu ka hor kulanka El Clasico ee usbuuca soo socda ay tahay inuu guul ka gaaro Viktoria Plzen kulanka Champions League.
Taageerayaasha ku sugan Manchester oo ku soo xoomay Ronaldo iyo BOOLIS loo baahday....+SAWIRRO